Seenaa Giifti Duree Ameerikaa Kan Jiil Baayiden
Amajjii 25, 2021
Haati warraa prezidaantii haaraa kan joo Baayiden Jill Biden, hojii isaanii White Housef dursa kan kennan imaammata barnootaaf ta’uu ifa godhaniiru.
Jill Baayiden jireenya naannoo Waashington kessa beeku, sababiin isaas abbaan warraa isaanii waggoota 36f seniti US waggoota saddeet immoo ennaa bulchiinsa Baaraak Obaamaa Itti aanaa prezidaantii ta’uun hojjetaniiru.
Jiil Baayiden haadha warraa prezidaantii isaan jalqabaa digirii doktorummaa qabni.
Abbaan warraa isaanii hirbuu seenuun aangootti dhufanii torban tokko yeroo hin guunneetti Baayiden gita isaanii hayyoota barnootaa waliin intrneetii irratti wal ga’ii geggeessuu dhaan rakkoon barsiisota Ameerikaa mudate jiru kan isaan dursa kennaniif ta’uu beeksisan.
Martinuun keenya yeroo ammaa rakkoo hedduutu nu mudatee jira. isin immoo daran akka rakkattan nan beeka. Garuu nuyi hyyoonni barnootaa yeroon kun kan keenya. Sababiin isaas jeeqama attamiin waa gaariitti akka jijjiirru beekna. Kanas daree barnootaa keessatti guyyaa guyyaa kan hojjennu dha jedhan Jiil Baayiden.
Muuxannoon seenaa barnootaa kan yeroo dheeraa Baayiden ilaalchisee, akka giifti dureetti hojii isaanii irraa waa hedduutu eegama.
Dargaggoo Daa’immanii fi Maanguddoota Deggersa Hin Qabne Gargaaruutti Bobba’ee Jiru
Pirez., Joe Biden bultii 100 keessatti nama Amerikaa miliyoona 100f qorsa Koronaa kennuuf hujiitti jira
Himannaalee Obbo Jawaar'faa irratti dhihaatan Keessaa meeshaa waraana seraa alaa qabachuu ka jedhu kuffisame
Marii Hayyootaa Mirga Hidhamtootaa fi Deemsa Murtii Haqa Ilaalchisee Geggeessame
Prezidaant Baayiden Tarsiimoo Faccisa KOVID 19 Labsuun Guyyaa Hojii Isaanii Eegalan